Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho oo sii kordhay, dad badan oo joojiyay in ay salaadda subax iyo cishaha ku dukadaan masaajidyada iyo garoonka ciidamada jooga garoonka dayuuradaha Muqdisho oo u muuqda qaar aar goosi wada. Ruunkinet 26/01/07
Dilalaka loo geysanaya dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sii kordhay kadib markii ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee u badan taageerayaasha madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha la wareegeen talada Xamar.
Warka ayaa intaasi ku daraya in inta badan magaalada Muqdisho lagu arko dad rayid ay oo la gowracay loogana tagay wadooyinka magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, dad badan oo ku dukan jiray masaajidyada salaadda subax iyo cishaha ayaa la sheegay in ay iska dhaafeen aaditaanka salaadda ee xilliyadaasi kadib markii ay la soo deristay cabsi ku saabadan nabadgelyadooda ayadoo dilal kala duwan lagu hayo wadaadada ama ciddii loo arko in ay ka muuqato sunnada wadaadimada.
Magaalada Muqdisho oo la sheegay in mudd leh billood ah ay ka jirtay nabadgeliyo weyn ayaa haatan ku soo noqotay xilligii ay ka talin jireen qabqablashaasha dagaalka.
Dhanka kale, garoonka dayuuradaha magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in tacaddi loo geysto dadka dhoofaya ayadoo ay ciidamada ka ka yimid Puntland ay wadaan wax u eg aarsi ay dad badan oo halkaasi ka dhoofaya u arkaan in ay yihiin dad aar goosi ku jira.
"Dowladda marka ay kula hadleyso waa in aad u muuqtaa in aad shacab tahay", ayay si jees jees ah u dhahayaan dad qaar marka ay baarayaan.
"Waxay u daran yihiin ragga ay haweentooda la socdaan oo ay hortooda ku baaraan ayagoo qab qabanaya haweyneyda meelo ay u arkaan in ay xasaasi u tahay ninka qaba haweentaasi", ayuu yiri nin safar ahaa oo ka dhoofayay garoonka Muqdisho.
"Jir dil iyo hanjabaad ayaa lagugu darayaa haddii aad isku daydo in aad weydiiso su'aal weydiiso raggaas", ayuu yiri rakaab kale oo ka soo dhoofay Xamar.